३ फिल्म कस्तो चले ? ‘बेबी…’का निर्माता खुसी ! « Ramailo छ
३ फिल्म कस्तो चले ? ‘बेबी…’का निर्माता खुसी !
प्रकाशित मिति : Jun 7, 2018
समय : 11:35 am
गत शुक्रबार तीन नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका थिए । ‘अमेरिका बोइज’, ‘हरी’ र ‘बेबी आइ लभ यू’ अल नेपाल जसो लागेका थिए । फरक जनराका यी फिल्महरु कस्तो चले त ?
व्यापारिक रिपोर्ट बुझ्दा ‘अमेरिका बोइज’, ‘हरी’ र ‘बेबी आइ लभ यू’ उस्तो चलेनन् । जति चले त्यतिमा फिल्म निर्माण युनिट भने सन्तुष्ट देखिन्छन् । यसमा सबैभन्दा सन्तुष्ट छन्, ‘बेबी आइ लभ यू’ का निर्माता शिव न्यौपाने । ‘हेर्ने जति दर्शकले फिल्मलाई मन पराउनु भएको छ । र, जति दर्शक आउनु भएको छ, त्यसमा हामी खुसी छौं’, निर्माता न्यौपाने भन्छन् । दोश्रो सातामा पनि दर्शकले साथ दिने निर्माता न्यौपानेको विश्वास छ । सन्तोष र पूजासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
जनक पाण्डे निर्देशित फिल्म ‘बेबी आइ लभ यू’ मा सन्तोष खड्गी र पूजा तिवारी मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत छन् । आफ्नो पहिलो कामलाई दर्शकले मना पराएकी उनीहरुको भनाई छ । फिल्ममा सृजना परियारले सह लगानीकर्ताको रुपमा छिन् । दर्शक प्रतिक्रिया हेर्नुस् :
यस्तै तीन फिल्महरुमध्ये ‘अमेरिका बोइज’ले हलमा दर्शकलाई आकर्षण गर्न सफल रह्यो । दर्शकले पनि फिल्मलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रवेश पौडेलको निर्देशन रहेको फिल्ममा अर्पण थापा, अभय बराल, आशिष प्रसाई र सृष्टि कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको छ । साथमा हरिहर शर्मा, सुनिल थापा, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरसियाले पनि ‘अमेरिका बोइज’मा अभिनय गरेका छन् । ‘अमेरिका बोइज’को दर्शक प्रतिक्रिया हेर्नुस् :
बिपिन कार्कीको शिर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘हरी’ ले भने अपेक्षित दर्शकको साथ पाउन सकेन । यद्पी फिल्मलाई भिन्न प्रयोगको रुपमा प्रशंसा भैरहेको छ । फिल्मलाई सफल केसी र प्रतिक गुरुंगले मिलेर निर्देशन गरेका हुन् ।